Retopo ( lowpoly making ) lessons
​Sculpting ပြုလုပ်ပြီး animation ပြုလုပ်လိုပါက high poly model ကို retopo ပြုလုပ်ပြီး low poly model ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါတယ်။
Retopo ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ Blender addon တခုကို သင်ပေးထားပါတယ်။
3D printing ပြုလုပ်သူများအတွက် ယခု lessons များမလိုအပ်ပါ။
Lessons 01 ( Click here for download )
Lessons 02 ( Click here for download )
Lessons 03 ( Click here for download )
Lessons 04 ( Click here for download )
Lesson 1 and2are sculpting lessons. Lessons3and4are retopo lessons with retopoflow blender add-on.
Blender Sculpting to Zbrush
​Blender Sculpting သင်ထားတဲ့ သင်တန်းသားများ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် Zbrush ကို ပြောင်းသုံဖို့လိုအပ်လာရင် ပြောင်းသုံးလို့ရအောင် video lesson အနေ နဲ့ ပြပေးထားပါတယ်။ Blender မှာ သိထားတဲ့ အတိုင်း Sculpting ကို Zbrush မှာ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ပြောင်းသုံးပုံ သုံးနည်း နဲ့ သိထားသင့်တာတွေကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ Zbrush က Sculpting ပိုင်းမှာ ပိုပေ့ါပေမယ်၊ Low poly , unwrap, texture painting, animation, Lighting and Render စတာတွေ လုပ်လို့မရပါဘူး။ Blender က အကုန်လုံးရပါတယ်။ အတွေအထူး ကိစ္စ မရှိရင် Zbrush ကို မပြောင်းပါနဲ့၊
3D print model ( Dragon )
3D print ပြုလုပ်ရန် အတွက် Dragon model တခုဆွဲသားခြင်းကို အစအဆုံး Video tutorials များနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
ယခု 3D Model မှာ Animation ပြုလုပ်ရန် မဟုတ်ပဲ 3D print ပြုလုပ် ရန် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သဖြင့်၊ Retopo, unwrap, texture paint စသည်တို့ ပြုလုပ်ရန် မလိုပါ။
နောက်ဆုံး high poly model ကို point လျော့ရန် အတွက် Decimate ပြုလုပ်လျင် print ထုတ် လို့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
Gold Cup for 3D print
​3D print ပြုလုပ်ရန် Gold cup တခု ဖန်တီးပုံကို အစအဆုံး ပြပေးထားပါတယ်။
Detail များကို Bump map တခု ဖန်တီးပြီး ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ တခုကနေ Detail ယူနိုင်ပုံကို လက်တွေ့ ပြုလုပ်ပြထားပါတယ်။